Sales & Marketing Executive | Yee Shin Co., Ltd. ﻿
•	ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူ/ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Customer များအပေါ်စိတ်ရှည်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်ကာ လစာညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
Sales & Marketing Executive (Medical)
•	B.Med.Tech(Laboratory) (or) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှ်ိသူဖြစ်ရမည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	Responsible for area sales target and sales development. •	Communicate with doctors and promote the products. •	Arrange appointments with doctors, pharmacists and other health care professionals. •	Arrange appointments with doctors, pharmacists and other health care professionals.
•	Strong of Labor Law , communication and negotiation skills.
Sales & Marketing Executive Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Yee Shin Co.Ltd Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Executive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon